Video:-Madaxa Gudiga Congreska Maraykanka uqaabilsan sirdoonka oo sheegay Trump iin uusan Ruushak xiriir kala dhaxayn – Idil News
Video:-Madaxa Gudiga Congreska Maraykanka uqaabilsan sirdoonka oo sheegay Trump iin uusan Ruushak xiriir kala dhaxayn
Posted By: Jibril Qoobey March 20, 2017
Madaxa guddiga Congresska Maraykanka u qaabilsan sirdoonka ayaa sheegay in aanu hayn caddeyn muujineysa in ay wada shaqeyn dhexmartay Ruushka iyo ololihii doorashada madaxweyne Trump ee sanadkii tegay.
Devin Nunes, oo waraysi siiyay telefishinka Fox News ayaa sheegay in sidoo kale aanay jirin caddeyn muujineysa in madaxweynihii hore ee Barack Obama uu amray in si qarsoodi ah loo dhagaysto dabaqa Trump Tower.
Mr Nunes ayaa hadalkan sheegay ayadoo maalinta beri ah uu agaasimaha FBI, James Comey, hortagi doono guddigaasi, si uu uga jawaabo su’aallo ku aaddan in Ruushka uu farageliyay doorashadii Maraykanka ka dhacday sanadkii hore.
Mr Nunes ayaa dhanka kale sheegay in uu ka walaacsan yahay eedeymaha ah in sirta qaranka Maraykanka loo dusiyo warbaahinta, asagoo sheegay in arrintaasi ay tahay dembi baaritaan u baahan,hoos ka daawo muuqaalka.
Be the first to comment on "Video:-Madaxa Gudiga Congreska Maraykanka uqaabilsan sirdoonka oo sheegay Trump iin uusan Ruushak xiriir kala dhaxayn"